Ungayilungisa njani iFayile ye-Excel eyonakeleyo okanye eyonakeleyo
Ikhaya iimveliso DataNumen Excel Repair Ungayilungisa njani iFayile ye-Excel eyonakeleyo okanye eyonakeleyo
Xa iifayile zakho zeMicrosoft Excel .xls, .xlw kunye .xlsx zonakalisiwe okanye zonakalisiwe ngenxa yezizathu ezahlukeneyo kwaye awukwazi ukuzivula ngempumelelo nge-Excel, ungasebenzisa la manyathelo alandelayo ukulungisa ifayile eyonakeleyo:
Phawula: Phambi kwe starInkqubo yokufumana kwakhona idatha, kuya kufuneka yenza ukhuphelo lwefayile yakho yoqobo eyonakeleyo ye-Excel. Lo ngu-most Inyathelo elibalulekileyo abanokulilibala abaninzi.
Okokuqala, iMicrosoft Excel inomsebenzi wokulungisa owakhelwe-ngaphakathi. Xa ifumanisa ukuba kukho ukonakala kwifayile yakho ye-Excel, iya kuba start Ukubuyiselwa kweFayile imo kwaye uzame ukukulungisa ifayile. Ngamanye amaxesha, ukuba Ukubuyiselwa kweFayile imowudi ayisi starngokuzenzekelayo, emva koko unokunyanzela i-Excel ukulungisa ifayile yakho ngesandla. Thatha i-Excel 2013 njengomzekelo, amanyathelo ngala:
Kwi ifayile menu, nqakraza vula.
Kwibhokisi yencoko evulekileyo, khetha ifayile ofuna ukuyivula, kwaye ucofe utolo ecaleni kwe vula iqhosha.
nqakraza Vula kwaye ulungise, kwaye ukhethe ukuba yeyiphi indlela ofuna ukuyisebenzisa ukubuyisa incwadi yakho yomsebenzi.
khetha Lungisa ukhetho ukuba ufuna ukubuyisa idatha eninzi kangangoko kunokwenzeka kwifayile eyonakeleyo.
If Lungisa ayisebenzi, emva koko sebenzisa Susa idatha ukuzama ukukhupha amaxabiso eseli kunye neefomula kwifayile.
Inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo yahluke kakhulu kwiinguqulelo ezahlukeneyo ze-Excel.
Ngokusekwe kuvavanyo lwethu, indlela 1 isebenza ikakhulu kumatyala apho ukonakala kwenzeka emsileni wefayile. Kodwa ayizukusebenza xa ukonakala kusenzeka kwintloko okanye embindini wefayile.
Ukuba indlela 1 iyasilela, kusekho iindlela ezininzi zokulungisa ifayile yakho ye-Excel ngesandla nge-Excel, kubandakanya ukubhala i-VBA macro encinci, unokufumana ulwazi oluthe kratya kwi https://support.microsoft.com/en-gb/office/repair-a-corrupted-workbook-153a45f4-6cab-44b1-93ca-801ddcd4ea53
Kukho izixhobo zasimahla ezivela kubantu besithathu ezingavula kwaye zifunde iifayile zeMicrosoft Excel, umzekelo,
IOfisi evulekileyo kwi http://www.openoffice.org. Le yiprojekthi yemithombo evulekileyo eyilelwe yenzelwe ukuxhasa iifomathi zeefayile zeOfisi, kubandakanya iifayile ze-Excel. Isoftware inokusebenza phantsi kweWindows.
LibReOffice kwi https://www.libreoffice.org/. Enye indawo yeofisi yasimahla.
I-KingSoft Spreadsheets kwi https://www.wps.com/. Esi sisixhobo simahla seWindows esinokuvula iifayile ze-Excel.
AmaSpredishithi eGoogle kwi https://www.google.com/sheets/about/ unokuvula ifayile ye-Excel kwi-intanethi.
Ngamanye amaxesha xa i-Excel isilele ukuvula ifayile yakho, ezi zixhobo ziya kuba nakho ukuyivula ngempumelelo. Ukuba kunjalo, emva kokuba kuvulwe ifayile ye-Excel, unokuyigcina nje njengefayile entsha eya kuthi ingenazimpazamo.
Kwiifayile ze-xlsx, zililiqela leefayile ezixineneyo Zip ifomathi yefayile. Ke ngoko, ngamanye amaxesha, ukuba urhwaphilizo lubangelwa kuphela yi- Zip ifayile, emva koko unokusebenzisa Zip izixhobo zokulungisa ezinje nge DataNumen Zip Repair ukulungisa ifayile, ngolu hlobo lulandelayo:
Ucinga ukuba ifayile ye-Excel eyonakeleyo yi-a.xlsx, emva koko kuya kufuneka uyinike igama elitsha ibe yi.zip
usebenzisa DataNumen Zip Repair ukulungisa a.zip kwaye yavelisa ifayile esisigxina a_fixed.zip.
Qamba igama a_fixed.zip buyela kwi -_fixed.xlsx
Sebenzisa i-Excel ukuvula i-_fixed.xlsx.
Kusenokwenzeka ukuba kubekho izilumkiso xa uvula ifayile esisigxina kwi-Excel, yithi nje ungayihoyi kwaye i-Excel izakuzama ukuvula nokulungisa ifayile esisigxina. Ukuba ifayile inokuvulwa ngempumelelo, emva koko unokugcina imixholo kwenye ifayile engenazimpazamo.
Ukuba zonke iindlela ezingentla ziyasilela, kuya kufuneka usebenzise DataNumen Excel Repair ukusombulula ingxaki. Iya kuskena ifayile eyonakeleyo kwaye ivelise ifayile entsha engenasiphoso ngokuzenzekelayo.